Malaia garnet, oo ka timid Kenya / pyralspit oo leh kalsiyum / Video
Malaia garnet, oo ka timid Kenya
Malaia garnet ama Malaya garnet waa magac muraayad leh oo muraayad ah oo loogu talagalay iftiin yar oo casaan ah oo casaan ah, oranjaanka casaanka ah, ama maqaar-cadaan jaale ah, kuwaas oo ka mid ah isku dhafka pyralspit taxane, almandine, iyo spessartine oo leh kalsiyum yar. Magaca Malaia waxaa laga tarjumay Swahili si macnaheedu yahay "mid aan qoys ahayn". Waxaa laga helaa bariga Afrika, dooxada Umba oo isku xirta Tansaaniya iyo Kenya.
Noocyada Garnet waxaa laga helaa midabyo kala duwan sida cas, midab, jaalle, cagaar, guduud, buluug, buluug, madow, casaan, iyo midab lahayn, oo leh midab badan oo casaan ah.
Tijaabo muujinaya garnet midabka madow ee madow ayaa soo bandhigi kara.
Goobaha Garnet 'nalalka iftiinka' waxay kala duwanaan karaan noocyada muraayadaha dhuxul-dhagaxa ah ee loo yaqaan 'gemstone-quality specimens' ilaa noocyada opaque loo isticmaalo ujeedooyinka warshadaha sida abrasives. Qodobka macdanta ee macdanta ayaa loo yaqaan 'vitreous' (sida quraarad) ama dabacsanaan (ciriiri).
Garnets waa nuucyo kala duwan oo leh qaabka guud X3Y2 (Si O4) 3. Goobta X waxaa badanaa lagu hayaa qoraallo qaylo leh (Ca, Mg, Fe, Mn) 2 + iyo Y oo ku yaala xarumo xayeysiis ah (Al, Fe, Cr) 3 + qaab dhismeedka octahedral / tetrahedral leh [SiO4] 4 - qabsadey tetrahedra. Garnets ayaa badanaaba laga helaa caado-diimeed, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa caado-guntada trapezohedron. (Fiiro gaar ah: ereyga "trapezohedron" sida lagu isticmaalo halkan iyo qoraallada macdanta badankood waxaa loola jeedaa qaabka loo yaqaan 'Deltoidal icositetrahedron' ee joomatiga adag.) Waxay ku qulqulayaan nidaamka dhirirka, iyagoo haysta saddex xabbo oo isku dherer siman iyo midba midba midka kale . Garnets ma muujin kala qaybin, marka marka ay jajabaan walaaca fekerka, qaybo aan caadi ahayn oo la sameeyo ayaa la sameeyaa (conchoidal).
Sababtoo ah kiimikada kiimikada ee garnet waa kala duwan tahay, xadhigaha atomiga ee noocyada qaar ka xoog badan kuwa kale. Natiijo ahaan, kooxdan macdanta ah waxay muujinaysaa xoogaa adag oo ku saabsan miisaanka Mohs ee ku saabsan 6.5 ilaa 7.5. Noocyada adag ee sida almandine ayaa badanaa loo isticmaalaa ujeedooyin xadidan.
iibso dhagaxyada dabiiciga ah ee dukaankeenna
Home | Nala soo xiriir